Douyu ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်သူ Zhang Wenming သည် ဒါရိုက်တာ နှင့် ပူးတွဲ စီအီးအို ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည် - Pandaily
Categories: Industry ကိုPandaily ဒီဇင်ဘာ 7, 2021 ဒီဇင်ဘာ 8, 2021 မှာ Posted
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဂိမ်း ဗဟိုပြု တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် သည့် ပလက်ဖောင်း Douyu သည် ဘုတ် အဖွဲ့နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု အပြောင်းအလဲများကို ယနေ့ ကြေငြာခဲ့သည်။Zhang Wenming သည် ဒါရိုက်တာ နှင့်တွဲဖက် အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် ရာထူးမှ ဆန္ဒ အလျောက် နုတ်ထွက် ခဲ့သည်၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မှ စတင်၍ အကျိုးသက်ရောက် လိမ့်မည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ကြေငြာ ချက်အရ Deng Yang သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မှစ၍ ကုမ္ပဏီ ၏ဒါရိုက်တာ ဘုတ်အဖွဲ့ ၏ဒါရိုက်တာ အဖြစ်ခန့်အပ် ခြင်းခံရသည်။ ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီ ၏ဒါရိုက်တာ နှင့် မဟာဗျူဟာ အရာရှိ ချုပ် Su Mingming သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်မှ စတင်၍ ဘုတ်အဖွဲ့၏ လျော်ကြေးပေးခြင်း ကော်မတီ၊ အမည်စာရင်းတင်သွင်း ရေးကော်မတီ နှင့် ကော်ပိုရိတ် အုပ်ချုပ်မှု ကော်မတီဝင် အဖြစ်တာ ၀ န်ထမ်း ဆော င်မည်ဖြစ်သည်။
Zhang Wenming သည် Douyu ကိုပူးတွဲ တည်ထောင် သူဖြစ်သည်။ သူနှင့် Chen Shaojie တို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် Douyu ကိုပူးတွဲ မတည် ထောင် မီ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Shenzhen Head Network Technology Co., Ltd. ကိုပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ Zhang Wenming သည် Buttayu တွင် ၁. ၈% ရှယ်ယာ ပိုင်ဆိုင် ခဲ့ပြီး Buttayu ကို 2019 ခုနှစ်တွင် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန် ခြင်းမပြုမီ ၃. ၂% ပိုင်ဆိုင် ခဲ့သည်။
Betta သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် ၏တတိယ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာကို နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ တတိယ သုံးလပတ်တွင် ကုမ္ပဏီ သည်စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ ယွမ် ၂. ၃ ၄၈ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး ၄ င်းတို့ အနက် တိုက်ရိုက် ထုတ်လွှင့် မှုမှ ယွမ် ၂. ၂ ၁၁ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။ တတိယ သုံးလပတ်တွင် ပလက်ဖောင်း ၏ပျမ်းမျှ မိုဘိုင်း MAU သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ် အလားတူ ကာလတွင် ၅၉. ၆ သန်းမှ ၆၁. ၉ သန်းအထိ တိုးတက်ခဲ့ပြီး ၃. ၉% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် သုံးလ တစ်ကြိမ် ပျမ်းမျှ သုံးစွဲသူ ၇. ၂ သန်း ရှိပြီး စံချိန်တင် မြင့်တက်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Betta ငါး: မိုဘိုင်း အဆုံး Q3 MAU နှိပ် H61.9 သန်း
အမေရိကန် အထက်လွှတ်တော် အဖွဲ့သည် နည်းပညာ လက်ဝါးကြီးအုပ် မှု ဥပဒေ ကိုအတည်ပြု ခဲ့ပြီး တရုတ် ကုမ္ပဏီ အချို့ ကိုထိခိုက် နိုင်သည်
ကိုPandaily Jan 22 Jan 22 မှာ Posted
စံႏႈန္း သစ္ အရ Bytedance 's TikTok ႏွင့္ Bytedance' s WeChat InternationalTencentတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် ထဲမှာ ပါမယ်။